Pediatric Wiricheya & Yechidiki Mawiricheya - Vana Wiricheya
musha / Chinyorwa Wiricheya / Pediatric Wiricheya
Chero Chigaro Saizi14 "Chigaro18 "Chigaro
Chero Chigadzirwa Kurema19.1 makirogiramu - 25 lbs50 lbs kana zvimwe
Chero Rudzi rweLegrestKufamba KureInobviswaPeta-Up
Mawiricheya evana evana anovakwa kuti agare
Paunoenda kuzviitiko zvemhuri, Karman pediatric manual manual wheelchair uye magetsi emagetsi zvigadzirwa zvinopa iwe nemwana wako kana vadiki vadiki kugona kujoina uye kuve nekukwanisa kufamba kune vese ADA aiteerera nzvimbo. Yedu simba rakamira chemawiricheya evana inopa nzira ine hutano hwakanyanya yekuchengeta huremu hwemapfupa uye kugona kumira pawiricheya. Iwe unogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana dzesarudzo dzinobatsira mwana wako kuti ave nekufamba senge semutariri anoshanda.
Mazhinji eKarman chemawicheya evana anogadzirwa neT6 Aluminium zvigadzirwa zvinopa yakanakisa furemu yekuchengetedza kwemwana wako uye kutakurwa. Wedu mawiricheya emwana anopa tekinoroji yakabatsirwa kune ese marudzi kusagadzikana kubva kuAutism kuenda kuCerebral Palsy. Aya mabhenefiti ekuvandudza anowedzera kudzikiswa kuburikidza amire uye nekuchengetedza hupenyu hunoshanda uchikunda kuwanda kwezvimhingamupinyi kubva pakusakwanisa kumira.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru, mhando, misiyano yamawiricheya aunosarudza kubva. Tine mamwe masarudzo e Manual Wiricheya, kusanganisira Kutakura Mawiricheya, Mawiricheya akajairwa, Mawiricheya asingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya,Ergonomic Wiricheya uye nezvimwe. Kusarudza chikamu, modhi, ruvara kana kunyangwe mutengo poindi yakakosha kune wekupedzisira mushandisi kunyatsonzwisisa "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System.
Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira kushandisa kwako kwehupenyu hwako mukunyaradza, kufamba uye kukwikwidza sarudzo. Isu kuKarman tiri pano uye takazvipira kune zvamunoda zvese. Isu tinotopa Kumira Wiricheya kutenderedza chigadzirwa chedu chemusanganiswa kusvika padanho repamusoro pazvipo muchikamu cheMobility Wheelchair. Tinokutendai nekutishanyira.
All Ultra lightweight vana mawiricheya anouya neanobata anobata akajairwa. Mazhinji anowanikwa se16 ″ kana 18 ″ chigaro upamhi. Mazhinji macheya ane dhesiki-refu armrest mapedhi. Mimwe mienzaniso yemwana wewiricheya ine mafirifi ekumashure nemaoko anoita kuti zvifambiswe zvive nyore kunyanya mutrori remota kana chero imwe nzvimbo yekuchengetera. Swing-away detachable legrest zvakare inopa dzimwe nzira dzekufamba uye nyore kushandisa. Bariatric mawiricheya kana rinorema basa mamodheru.
Bvunza nezve edu anoshanduka kana mushonga unobva kuBariatric kana iyo KM-8520F20 uye KM-8520F22 isingakwanise chero chaicho chaunoda iwe kana kutarisa edu BT-10 modhi uye S-2512 modhi. Zvigaro zvekufambisa zvakare zvinofanirwa kuve zvinoshanduka zvekubatsira zvekufambisa zvekufamba uye chiitiko kunze kwemusha, iwe uchavawanawo vari pasi peasina kurema mashoma mawiricheya.
Kuwana Wiricheya Yakakwana KUKWANA WAKO kwakakosha. Ndokusaka isu takaparura iyo itsva ERGO FIT ™ Campaign yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics, uchienzanisa uye uchienzanisa zvese zviri zviviri zvinodiwa nemuviri wako, yako Mawiricheya Zviyero, uye zvakare kuenzanisa nharaunda iwe yauchange uchinakidzwa nevana vako wiricheya.
Kunyangwe iri kunze kwekushanya uye kuona kuti kukwira ramp ine hushoma huwandu hwekushora, kana kuve wakasununguka sezvinobvira nekuda kwekushandisa kwenguva refu, yedu ERGO FIT ™ nzira inopa huwandu hwakawanda hwe sarudzo uye zvishongedzo, kana mamodheru ane akasiyana misiyano yakagadzirirwa kuwedzera kufamba kwako uye nyaradzo.
Kushopu yedu Chitoro cheWiricheya - Manual Mawiricheya